Duqa Muqdisho Oo Xubno Mucaaradka Dowladda Ka Tirsan Soo Dhaweystay
Saturday May 05, 2018 - 01:12:24 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho oo Xafiiska shaqada jooga muddo ku siman Shan Bilood, ayaa bilaabay soo dhaweysashada iyo inuu la Taliyeyaal gaar ah ka dhigto xubno ka tirsan Mucaaradka dowladda.
Xafiiska Duqa Magaalada Muqdisho ayaa lagu dhex arkaa xubno Mucaarad ku ah dowladda Madaxweyne Farmaajo, kuwaasi oo la taliyeyaal gaar u ah Duqa Magaalada Muqdisho, taasi oo muujinaysa Isfahan waa soo deg dega oo Madaxtooyadda iyo Duqa Muqdisho soo kala dhex gala.
Shaqsiyaadka lagu arkay Xafiiska Duqa Muqdisho waxaa ka mid ah xubno la shaqeyn jiray dowladii Xasan Sheekh Maxamuud, haddana noqday laba kaarayaal iyaga oo raadinaya xil inay ka qabtaan Gobolka Banaadir waxaana kamid aha Agaasimihii Warfaafinta Villa Soomaaliya xiligii Xasan Sheekh ninka lagu magacaabo Shadoor Xaaji oo maalmihii ugu dambeeyay la socday Kooxda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee Wadajir balse Saaxiib ay isku Sir qarsadaan ah Guddoomiye Yariisoow.
Duqa Muqdisho ayaa wada qorshe ku aadan inuu dhawaan isbedel ku sameeyo qaar ka mid ah Gudoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir, waxaana sida ilo xog ogaal ah ay xaqiijinayaan ay sheegayaan inay suuragal tahay raadadka xubno mucaarad ah inay soo galaan Gudoomiyeyaasha cusub.
Xafiiska Duqa Muqdisho ayaa waxaa ka taagan jahwareer Siyaasadeed oo cakiran, taasi oo keentay mucaaradka dowladda inay awood badan ku yeeshaan Xafiiska Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Yariisow.
Waxaa xusid mudan durba inuu bilowday khilaafka Madaxtooyadda iyo Duqa Muqdisho, kadib markii shaqsiyaad ka tirsan Madaxtooyadda ay baraha Bulshada ku dhaliileen Gudoomiyaha Gobolka Banaadir sida uu ugu fashilmay daryeelida Ciyaartoyda Qaranka ee da’yarta.
Dhawaan Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday arrin fadeexo wayn ku noqotay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, kadib markii Ciyaartoydii da’yarta ee Qaranka Somaliya ma talaayay meel cidlo ah looga dhaqaaqay markii la soo dhaweeyay, waxaana sawiro la soo qaaday ay muujinayeen Ciyaartoyda oo bajaaj raacaya, xilli ay yaalaan 30 bas oo kuwa waaweyn ah oo dowladda hoose dhawaan lagu wareejiyay.
Jahwareerka Siyaasadeed iyo fashilka ka jira Xafiiska Duqa Muqdisho ayaa ah mid bilahan soo socday, balse muddooyinkaan dambe aad u soo xoogeystay, waxaana arrintaan ay tahay mid si wayn looga hadal haayo Magaalada muqdisho.
Gudoomiye Yariisow, ayaa isaga oo ka qayb galaayay Dood ka baxeysay Tv-ga Somali Cable, wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay Xildhibaano ka tirsan dowladda, laakiin tani ayaa muujinaysa in afkaarta mucaaradka iyo aragtidooda ay noqotay midda uu sida maldahan ugu hawlgalo Duqa Magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaaatee, masuuliyiinta Gobolka Banaadir ay ku jiraan Xubno ka tirsan Madaxtooyadda iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, kuwaasi oo aad ula socda dhaqdhaqaaqa Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa haddana la ogeyn sida Yariisow saaxiibada gaarka ah ay ku sii ahaan doonaan Xubnaha mucaaradka ka tirsan ee xafiiskiisa aanan ka bixin.